ဥရောပနိုင်ငံများမှခရီးသွားသိကောင်းစရာများ: ပြင်သစ် - သတင်း Rule
လူအစုအဝေးအအဲလ်ပ်တောင်တန်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းမှဆွဲဆောင်နေသည်, sunlit စပျစ်ဥယျာဉ်နှင့်ဤလှပသောတိုင်းပြည်နေရောင်-ဖုတ်ကမ်းခြေ.
ပြင်သစ်အခြားမည်သည့်တိုင်းပြည်ထက်ပိုပြီးခရီးသွားဧည့်ဆွဲယူသောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်သည်. ဒီဒဏ်ငွေဝိုင်အဘို့ကြီးသောဂုဏ်သတင်းFranceísပေးသောကိစ္စတွင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုခြင်းငှါမလွယ်ကူကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းသောအစာအာဟာရ, မြင့်မားတဲ့ဖက်ရှင်နဲ့စိတ်အေးလက်အေးလူနေမှုပုံစံစတဲ့.
သို့သော်ပြင်သစ်ခြောသင်၏နှလုံးအကြောင်းအရာမှီတိုင်အောင်စားသောက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်စဉ်, သာဟင်းလျာ-အစွန်းဖြတ်တောက်ထက်ဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်တိုင်းပြည်အများကြီးပိုရှိပါတယ်. နွေဦးကဒီမှာဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဆောင်းရာသီအားကစားအတွက်စိတ်ဝင်စားသူတို့အားအချို့ဝင်ရိုးစွန်းဂီယာနှင့်အတူအဲလ်ပ်တောင်တန်းနှင့်နီဇ်မှာ drop နိုင်.
အဆိုပါနွေရာသီအလွန်ပူပြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဆောင်းရာသီအလယ်အလတ်များမှာ. အဆင်ပြေဖိနပ်တစ် All-ရာသီဥတုအင်္ကျီနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးမဖြစ်မနေများမှာ.
အင်္ဂလိပ်: Eiffel မျှော်စင် Deutsch: Eiffel မျှော်စင်Français : Eiffel မျှော်စင် (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
အမြိုးသမီးမြား, အထူးသဖြင့်, စားသောက်ဆိုင်အချို့ကိုထိုသို့မေးမြန်းအဖြစ်ကော့တေးဆင်မြန်းသယ်သင့်တယ်.
မည်သည့်ဘာသာရေးဆိုဒ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာ, sleeveless ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီတိုကိုဝတ်ဆင်ထားမှရှောင်ကြဉ်, သူတို့ထိုကဲ့သို့သောသောနေရာများမှာမကြိုက်ကြသည်အဖြစ်.
စာတိုလေးသို့မဟုတ် Madame အဖြစ်.
Nudism သာအချို့သောကမ်းခြေအပေါ်ခွင့်ပြု. လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာ, ကောင်းသော
ပဲရစ်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏မြို့, လက်လှမ်းမှီအကွာအဝေးအများအပြားဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတူတစ်အကြီးအကျယ်မြို့မှကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါသည်
ဒါဟာထက်ပိုကြွား 80 ပြတိုက်နှင့် 200 အနုပညာ
မှတစ်ဦးကခရီးစဉ် ဒစ္စနေးမြေယာ နှင့်ခမ်းနား Eiffel မျှော်စင်ခရီးစဉ်ကျိုးနပ်စေမည်.
အဆိုပါဆွဲဆောင်မှုခရီးသွားဧည့်အစက်အပြောက်တစ်ဦး၏သင်္ချိုင်းဂူကျော်အထိချဲ့သော Arc de triomphe များမှာ
အမည်မသိစစ်သား, အ Notre Dame ဘုရားကျောင်းမှာ၏တားမြစ်ထား Gothic ဗိသုကာပညာ, ပုံ
သန့်ရှင်းသော Coeur, Leonardo da Vinciís Mona Lisa ကိုမှ, ထိုတလျှောက် Moulins Rouge နှင့်လှေခရီးစဉ်
လှည်းမူဆယ်-အဆောက်အအုံ pass တ Get, အသုံးပြုခွင့်ပေးသော 70 အထိမ်းအမှတနှင့်
ဝန်ဆောင်မှုအခွန်ဥပဒေကြမ်းတွင်ထည့်သွင်းပေမဲ့, တစ်ဦးနှိမ့်ချအစွန်အဖျားအများကြီးကုန်ကျwonít. တစ်ဦးအပိုတစ်ဒေါ်လာစားပွဲထိုးမှပျဉ်းအဖြစ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်. တစ်ပျဉ်း $2 ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းများအဘို့ကျန်ကြွင်းစေနိုင်သည်.
220-ဗို့, 50-သံသရာ AC အကလက်ရှိ.
Deutsch: ပဲရစ်: Eiffel မျှော်စင်နှင့် Champ က de အင်္ဂါဂြိုဟ် (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
ဤနေရာတွင်လုပ်ကိုင်သောအမျိုးသားရေးလေကြောင်းလိုင်း Air ကိုပြင်သစ်ဖြစ်ပါသည်. အများစုကတန်ဖိုးနည်းလေကြောင်းလိုင်း, လွန်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံကနေန်ဆောင်မှုပေး. ပဲရစ်-Charles de Gaulle လည်း Roissy-Charles de Gaulle ပြင်သစ်၏အဓိကလေဆိပ်သည်အဖြစ်လူသိများ, ပယ်မြို့မှ 23km သောဖြစ်ပါသည်.
နည်းပြ, အငှားယာဉ်များ, limousines န်ဆောင်မှုလေဆိပ်တွင်ထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ်.
ဤရွေ့ကားရထားပြေး 24 နာရီ. လေယာဉ်ခရီးစဉ်န်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်သောအခြားလေဆိပ်ပဲရစ်-Orly များမှာ, Marseille, ဘော်ဒိုး, nice, လိုင်ယွန်နှင့် Toulouse.
ကူးတို့နှင့်ခရုဇ်ခရီးစဉ်ထိုကဲ့သို့သောအတ္တလန္တိတ်အဖြစ်ဆိပ်ကမ်းများမှလုပ်နိုင်ပါတယ်, မြောက်ပင်လယ်, မြေထဲပင်လယ်, နှင့် Havre.
1. 200 စီးကရက်သို့မဟုတ် 50 ဆေးပြင်းလိပ်သို့မဟုတ် 100 cigarillos သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီး၏ 250g
2. 1ကျော်ဝိညာဉ်လီတာ 22 ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်အရက်အဖျော်ယမကာများ 2liter နှုန်းအထိ 22 ရာခိုင်နှုန်း
4. 50eau က de toilette ၏ရေမွှေးနှင့် 250ml ၏ဂရမ်
5. 500ကော်ဖီထုတ်ယူ၏ကော်ဖီသို့မဟုတ် 200g ၏ဂရမ်
6. 100လက်ဖက်ရည်ထုတ်ယူ၏လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ် 40g ၏ဂရမ်
33291	0 ပြင်သစ်လေကြောင်း, အဲလ်ပ်တောင်တန်း, Bitcoin, ပြင်သစ်, ပြင်သစ်ဘာသာစကား, ပဲရစ်, Provence, Toulouse